अमेरिकामा गर्भपतनसम्बन्धी कडा कानुन, बलात्कारको गर्भसमेत फालेमा डाक्टरलाई नै आजीवन कैद - VOICE OF NEPAL
अमेरिकामा गर्भपतनसम्बन्धी कडा कानुन, बलात्कारको गर्भसमेत फालेमा डाक्टरलाई नै आजीवन कैद
१ जेष्ठ २०७६, बुधबार १०:१७
170 ??? ???????
डोनाल्ड ट्रम्पले राष्ट्रपतिको चुनाव जितेपछि अमेरिकी सर्वोच्च अदालतमा अनुदार विचार राख्ने न्यायाधीशहरु नियुक्त भएको बताइन्छ । यसैबीच अमेरिकाको अलबामा राज्यको सिनेटले पारित गरेको एक कडा कानुनले अहिले त्यहाँका मानव अधिकारवादी संस्थालाई समेत चुनौति दिएको छ ।
मङ्गलबार सिनेटले गर्भपतन रोक्नेसम्बन्धी कानुनमा गर्भपतनमा पूर्ण रुपमा प्रतिबन्ध लगाउनुका साथै गर्भपतनमा सहयोग गर्ने चिकित्सकलाई समेत आजीवन कैदको सजाय हुने कानुन पारित गरेको हो । यो कानुन संयुक्तराज्य अमेरिकाकै सबैभन्दा कडा कानुन भएको मानिएको छ ।
बलात्कार वा नातेदारबाट हुने व्यभिचारका कारण गर्भ रहेमासमेत फाल्न नमिल्ने कुरा विधेयकमा रहेकाे बताइएकाे छ । अनुदारवादि न्याधिसहरु रहेको कारण यो विधेयक पारित हुने सम्भावना बढी रहेको छ । किसिको याे नयाँ विधेयक पारित हुने सम्भावनासमेत बढी रहेको त्यहाँका अधिकारीहरु बताउँछन् । रिपब्लीकन पार्टीको बहुमत रहेको अलबामा राज्यको सिनेटले पारित गरेको नयाँ विधेयक प्रमाणिकरणका लागि गभर्नर के इभे समक्ष पुगेको छ ।
गभर्नरको हस्ताक्षरपछि उक्त विधेयकले कानुनको रुप लिनेछ । तर अमेरिकाको एक सर्वाेच्च मानव अधिकारवादी संस्था एसीएलयूले सो कानुनको कार्यान्वयन रोक्नेगरी अदालतमा चुनौती दिने तयारी गरेको छ ।
चीनमा भूकम्प: ४ को मृत्यु, २४ घाइते